U.S. says Zimbabwe vote flawed, won't lift sanctions - tribunedigital-chicagotribune
WASHINGTON (Reuters) - The United States believes Zimbabwe's recent election was flawed and it doesn't plan to loosen sanctions against President Robert Mugabe's government until there are signs of change in the country, the State Department said on Monday, despite an endorsement of the vote by Southern African leaders.
"The United States stands by our assessment that these elections, while relatively peaceful, did not represent a credible expression of the will of the Zimbabwean people due to serious flaws throughout the electoral process," said State Department spokeswoman Jen Psaki.
"We have made clear to the government of Zimbabwe and the region that a change in U.S. sanctions policy will occur only in the context of credible, transparent and peaceful reforms that reflect the will of the Zimbabwean people."
Psaki said it was "feasible" that the U.S. could review sanctions toward Zimbabwe if conditions in the country improved, but for now they would remain.
U.S. says Zimbabwe vote flawed, won't ease sanctions
Mugabe seeks peace with 'arrogant' West after disputed...